आफ्नै नेतृत्वबाट खतरा रहेको भन्दै मलेसिया एनआरएन उपाध्यक्ष सुन्दर आलेद्वारा याचना गर्दै सम्पर्कबिहिन - MONGOL KHABAR
आफ्नै नेतृत्वबाट खतरा रहेको भन्दै मलेसिया एनआरएन उपाध्यक्ष सुन्दर आलेद्वारा याचना गर्दै सम्पर्कबिहिन
काठमाडौं । भदौ ४ बिहिबार, गैरआवासी नेपाली संस्था (एनआरएन) मलेसियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुन्दर आलेले सोमबार बेलुकी आफ्नै संस्थाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूबाट आफू खतरा रहेको जनाउँदै फेसबुकमा स्ट्याटस् लेखेर सम्पर्क विहिन भएका छन् ।
अध्यक्ष हरि भट्टराईले साइवर अपराध कसुरको उजुरी दिएकाले उक्त स्ट्याटस छोडेका हुन् भन्ने बुुझिन्छ । ‘मैले तन, मन, धनले हरेक नेपालीहरू प्रति सकेको सहयोग गर्दै आएको र निरन्तर गर्ने पनि छु । यति गर्दा पनि म प्रति संघ भित्रकै अध्यक्ष लगायत संघ भित्रकै व्यक्तिहरू मलाई फसाउने तरिकाले मलेसियाको प्रशासनमा विभिन्न आरोप लगाएर रिपोर्ट गरिएको हुँदा राजदुतावास मलेसिया, विभिन्न संघ सस्था, साथै शुभ चिन्तकहरूमा जानकारी गर्दछु ।’ आलेको स्ट्याटस्को केही अंश यसप्रकार थियो ।
सोही घट्नासँग जोडिएर मंगलबार एक अनलाईनले समाचार लेख्यो । समाचार अनुसार एनआरएनका पूर्व महासचिव सुनिल चालिसे पक्राउ परिसकेका छन् । त्यही अनलाइनमा एनआरएन मलेसियाका कर्तुतबारे निरन्तर समाचार आएको र सोही शंकाको आधारमा उजुरी परेको पनि जनाएको छ ।
के थियो कर्तुत ?
कुनै बेला एनआरएनले आफ्नो विश्वव्यापी सञ्जाल बनाइरहेको बेला गठन गरिदिनुस्, सदस्य बसिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मलेसियामा पछिल्लो नेतृत्वको लागि झण्डै चुनावसमेत हुने अवस्था आएको थियो । नेतृत्वको लागि लामो समयको रस्साकस्सीमा श्रमिकको तर्फबाट आउने कि श्रमिकको लागि गन्तव्य खोजिदिने म्यानपावर कम्पनीबाट हुने भन्नेबारे निकै बहस पनि चलेको थियो । अध्यक्षका लागि वर्तमान अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका हरि भट्टराई र सुन्दर आले नै थिए । तर अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको पदमा तालमेल भएपछि चुनावरहित एनआरएनको सम्मेलन भनेर समाचारमा छाउनसमेत सफल भएको थियो ।
हरि भट्टराई अध्यक्ष भएपछि नेतृत्वमा उनले गरेको क्रियाकलापहरू समाचारमा आउन थाले । ति क्रियाकलापहरू आर्थिकसम्बन्धि थियो ।
सबैभन्दा पहिले श्रमिक कल्याणकारी कोषलाई मलेसियन रिंगेट ५० हजारको चेक दिएर ५ महिनासम्म कोषमा पैसा जम्मा नभएको समाचार आएको थियो । समाचारहरू तथ्यहरू पेश गर्दै एनआरएन मलेसियाको सिआइएमबी बैंकमा खाता खोलिएको, कोषाध्यक्षको साथमा जम्मा भएको जानकारी दिएको थियो । त्यसैगरी उक्त कोषको पैसा मिटरब्याजमा लगाएको समाचार पनि आएको थियो । कोषको पैसा कोषाध्यक्षको जिम्मा रहेको कुरा अध्यक्षले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी पनि दिएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले सबै समाचारको खण्डन पनि गरेका छन् । उक्त खण्डनलाई उक्त अनलाइनले स्क्यानप्रति नै राखेका छन् । तर कोषाध्यक्षको साथमा पैसा जिम्मा हुनु पनि अपारदर्शीकै नमुना हो ।
उक्त कोषका हिसाबहरूमा पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुन्दर आलेले वैठकमा राखेको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । त्यही उल्लेखित नामकै कारण सूचना चुहाएको, नेतृत्वलाई बद्नाम गराएको आरोप लगाएर उजुरी गरेको समाचारबाट बुझिन्छ । समाचार उपलब्ध गराउनमा सहयोग गरेको भन्दै पूर्व महासचिव सुनिल चालिसेलाई पक्राउ गर्न लगाएको उल्लेख छ ।
के भन्छन् आलेका शुभचिन्तक र आरोपी ?
सुन्दर आलेले उक्त स्ट्याटस लेखेर सम्पर्कविहिन भएपछि शुभचिन्तक तथा साथीहरूले सम्पर्कमा आउन र सत्यतथ्य कुरा राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । एक अनलाइन समाचारका अनुसार सुन्दर आलेका फेसबुक, ह्वाटएप्स्, भाइवर सबै बन्द छन् । तर अध्यक्ष भट्टराईले उक्त आरोप निराधार भएको बताएको उल्लेख छ । बरु भ्रामक समाचार मिडिया लेख्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
हालैको वैठकमा नेतृत्वमा फरक मत राख्नेहरूलाई कारवाही गरेको तथा अन्य संस्थाको नेतृत्वमा रहनेवित्तिकै समानान्तर संस्थाको हैसियत राखेर एनआरएन छोड्न दबाब दिने गरेको आरोप पनि भट्टराईमाथि छ ।
एनआरएनमा सन् २००३ कै ग्लोबल सम्मेलनमा मलेसियाको प्रतिनिधि भएको देखिन्छ । स्थापना चाहीँ सन् २००५ मा भएता पनि सन् २००९ पछिको पुनर्गठनपश्चातमात्रै सक्रिय हुँदै आएको थियो । विश्वमा नेपालीहरू अस्थायी या स्थायीरुपमा बसोबास गरेपछि ‘नेपालको लागि नेपाली’ नारासहित स्थापना भएको संस्थाले सम्बन्धित देशमा रहेका अवस्थाअनुसार नै मुद्दा बनाउने गर्दछ । रोजगारको गन्तव्य मानिएको मलेसियामा लामो समयसम्म नेपाली मूलका मलेसियन नागरिकले नेतृत्व गरे भने रोजगारका लागि आएकैमा नेतृत्व पुग्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो । तर नेतृत्व भने म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि तथा व्यापारीवर्गमा घुमिरहेको छ ।